Ungawongeza njani umbhalo okanye imifanekiso kwii-AutoShapes kwiLizwi 2007
Ungasebenzisa ii-AutoShapes ezithile njengezakhelo zokufaka umfanekiso okanye isicatshulwa esithile, esinokuthi sikhuphele uxwebhu lwe-Word 2007 oludinayo. Xa usenza i-AutoShape yakho, khetha imilo enokusetyenziswa njengesakhelo, njengepoligoni. Ngaloo milo ikhethiweyo, yongeza umfanekiso okanye isicatshulwa, kuxhomekeke kwinto oyifunayo.
Ukwenza umfanekiso ozenzekelayo owenziwe ngomfanekiso
Gcina umfanekiso kwi-AutoShape yakho ngokulandela la manyathelo:
ivithamini b12 idosi yenaliti
Khetha i-AutoShape, kwaye ukusuka kwiFomathi yeThebhu yeFomathi yeqela, khetha uMilo ugcwalise → umfanekiso.
Inketho yokugcwalisa iiMilo kwiqela lezimo zeMilo yibhakethi elincinci lokupenda. Cofa utolo ecaleni kwayo ukuvula imenyu; emva koko ukhethe umfanekiso. Ibhokisi yencoko yencoko yababini iyavela. Isebenza njengayo nayiphi na ibhokisi yencoko yababini evulekileyo, kodwa ijolise ekufumaneni imifanekiso.
Sebenzisa i Khetha umfanekiso ibhokisi yencoko yababini ukuzingela kwaye ukhethe umfanekiso.
Zulazula ngeefolda zakho njengoko kufuneka.
Cofa Faka iqhosha.
Umfanekiso ubekwe kwisakhelo. Ukuba umfanekiso uphambukile, zama ukuphinda wenze ubungakanani be-AutoShape ngokunqakraza kwaye urhuqe esinye seziphatho ezijikelezileyo.
Ixabisa malini iperococet ngaphandle kweinshurensi
Ukwenza ibhokisi yemiyalezo ezenzekelayo
Guqula i-AutoShape yakho ibe yibhokisi yokubhaliweyo ngala manyathelo:
Ukusuka kwiFomathi ithebhu Faka iifomati zeqela, cofa Hlela umbhalo iqhosha.
I-AutoShape itshintshiwe yabhalwa kwibhokisi yokubhaliweyo, kwaye kubonakala ukuba itheyibhile yeziXhobo zeBhokisi yeziTayile ibonakala.
Chwetheza kunye nefomathi isicatshulwa osifunayo kubume.
idosi ephezulu yecymbalta
Lumnka! Ungaqhubeka nokuchwetheza ixesha elide emva kokuba isicatshulwa singangeni kwi-AutoShape kwakhona. Umbhalo owubonayo kuphela uvela kwimilo. Nawuphi na umbhalo ogqithisileyo awubonakali (ngaphandle kokuba wenze ubungakanani kwakhona kwi-AutoShape ukuyenza nkulu).
yintoni ioyile yokuthambisa
coly mycin s otic
Zintoni iipilisi zegabapentin